Rabshado Dad Ku Dhinteen Oo Ka Dhacay Magaalada Gaarisa iyo Suuq Mugdi oo Dab la qabadsiiyay.
Thursday August 10, 2017 - 20:28:29 in Wararka by Super Admin
Khasaara hantiyadeed iyo mid nafeed ayaa ka dhashay rabshado ka dhacay magaalada Gaarisa ee gobolka NFD kadib isku dhacyo dhax maray shacab taageersan mucaaradka iyo ciidamo katirsan booliska.
Ugu yaraan sedax qof shacab ah ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen isku dhacyada oo ka dhashay weerar lagu qaaday goob lagu tirinayay codadka doorashooyinkii laba maalin ka hor ka dhacay dhammaan gobollada wadanka Kenya.
Taageerayaasha Xisbiga NASA ayaa isugusoo baxay waddooyinka Gaarisa kadibna waxay isku dhaceen ciidamada Booliska oo daacad u ah Xisbiga uu madaxda ka yahay Uhuru Kenyatta.
Goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in dhammaan goobaha ganacsiga iyo xarumaha maamulka magaalada Gaarisa Albaabada loo laabay maanta duhurkii kadib markii xaaladdu xumaatay islamarkaana ciidamada booliska ay toogteen dad shacab ah.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada Booliska ay dab qabadsiiyeen Suuqa ganacsi ee ugu weyn magaalada Gaarisa, guddiga ganacsatada Gaarisa waxay sheegeen in khasaara malaayiin dollar ah uu ka dhashay gubashada suuq mugdi.
Gubashada Suuqa Ganacsiga magaalada Gaarisa ayaan aheyn mid cusub waxayna dadka soomaalidu ku eedaynayaan xukuumadda Gubidda suuqa ay uga dan leedahay cadaadis siyaasadeed oo ay ku saarayso shacabka Soomaalida.
Ma ahan markii ugu horraysay oo suuqa Gaariga la gubo dhowr sano ka hor ayay aheyd markii uu gabi ahaanba suuqu Basbeelay xilligaas oo isku dhacyo dhax mareen ciidamada booliska iyo dad caraysan.
Rabshadaha wadanka Kenya waxaa ku dhintay 11 qof tan iyo markii lasoo gaba gabeeyay codbixinta waxaana laga cabsi qabaa in rabshaduhu kusii baahaan magaalooyin ay ku xoogganyihiin taageerayasha Mucaaradka uu madaxda ka yahay Railla Odinga.